ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: To Verse
စာရေးသူ Unknown အချိန် 12:23 PM
လင်းကြယ်ဖြူ July 31, 2009 at 1:44 PM
ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ကဗျာကိုလုပ်ထားတာရှယ်ပဲ ...
desertraindrops July 31, 2009 at 3:35 PM
မိုက်တယ် ။ ကိုချမ်း ကဗျာလေးကောင်းတယ်။
Angel Shaper July 31, 2009 at 5:44 PM
ကောင်းမှကောင်း။ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး။
mysterysnow July 31, 2009 at 8:04 PM
ပြီးတော့ Creation လေးလဲ လှတယ်...
Anonymous July 31, 2009 at 8:53 PM
မိုးစက်အိမ် August 1, 2009 at 1:30 AM
အိမ်ဒီဇိုင်း နဲ. ကဗျာက စားသားတွေက
တော.ဟပ်နေတာဘဲဗျာ ... ဂွတ်တယ်...
ဇော် August 1, 2009 at 9:31 AM
ဘယ့်နှယ် မောင်ဝင်းကြည်က ချဉ်ချင်းတတ်နေရတာတုန်း။ ဟီးဟီး။
တကယ် အတော်ကို မိုက်တဲ့ကဗျာ။ လက်ဖျားခါသွားတယ် ကျနော့်အကို မောင်ဝင်းကြည်ကို။ အဟီး။ =)
Unknown August 1, 2009 at 3:15 PM
တခါတလေတော့လဲ ကိုဝင်းကြည်လဲ ချဉ်ချင်းတက်ပါရစေဦး။
မြစ်ကျိုးအင်း August 2, 2009 at 12:29 AM
ညလင်းအိမ် November 6, 2009 at 8:47 PM